The best ubuso ukhilimu for isikhumba esomile: izibuyekezo, izilinganiso
Kukhethwa kwesokudla ukhilimu inquma isimo isikhumba, noma okunye okufuze uhlobo kungenzeka. Girls kuze kube kwabaneminyaka engamashumi amabili babhekana nenkinga epidermis oily. Kusukela induna futhi elicwebezela ngokukhethekile okunamafutha alwa ejenti utshwala equkethe. Futhi isikhumba kubo ngesikhathi esifanele yokuziphindiselela. Ngemuva kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu noma amashumi amathathu, lapho umsebenzi hormone luyaphela nezindlala sebaceous phezani secrete amafutha, laba besifazane babhekene nenkinga okuphambene ngokuphelele. Isikhumba iba phezu-ezomile futhi olungenayo umswakama. umbala wayo luphola, kukhona ngokucasuka flaking. Isimo sezulu nesithwathwa futhi isimo ezingezinhle kwemvelo emadolobheni amakhulu, ukucindezeleka futhi imikhuba emibi ukwengeza kule nkinga ezengeziwe. Akunandaba noma ngabe isici azalwa naso noma bathenga ngeminyaka - sidinga ukuthola ngempumelelo ukhilimu ebusweni for isikhumba esomile. Izibuyekezo abesifazane engibathandayo hydration we epidermis kuyinto kuqala, kusisize ukuba enze isilinganiso wokunakekela imikhiqizo yezimonyo.
Indlela ukuhlukanisa ukhilimu ezinhle okubi
izimbiza Stylish cut ingilazi basenza izindlela eziphumelelayo ukudlula lowo iqukethwe amashubhu plastic evamile. Lesi sakamuva yokuhlanzeka nakakhulu, ngoba asazi engeza ukhilimu iminwe amagciwane. Kodwa kungcono ukukhetha ukhilimu ukuthi has a dispenser futha. Abesifazane abaningi bacabanga ukuthi amanani entengo aphezulu isiqinisekiso lomkhiqizo. Kodwa lokhu akulona icala. amafemu Othembekile yezimonyo efanelwe igama ngokwayo ku ukukhangisa, okuyinto ezibizayo. Futhi intengo ukuze zenze izikhangiso kanye emaflaya kubonakala ku-product yakho yokugcina. amafemu Muhle zithi ubuchwepheshe ezintsha ziye zathinta lizinga lekunakekela-izindawo for isikhumba esomile. Ezinye brand of okhilimu zidayiswa kuphela Pharmacy amanethiwekhi. Le ndlela ukumaketha ihlose ukuqinisekisa umthengi e imiphumela izidakamizwa izidakamizwa. Kodwa indlela yokwahlukanisa ezinhle ubuso ukhilimu for isikhumba esomile? Izibuyekezo beauticians zithi kusebenta umkhiqizo kuncike kuphela ngezithako zawo.
Yini izinto kumele ibe ukhilimu for isikhumba esomile
Ngemuva kweminyaka engamashumi amabili nanhlanu, le epidermis iqala ukulahlekelwa umswakama. ezizivelelayo Mahhala uqale ukusebenza yabo emibi Indwangu. Ukuze uhlale uyingane, kudingeka moisturize futhi unike ukondliwa kudingekile kwesikhumba. Yiqiniso, akukho wesimo esisodwa jikelele, okwakuyoholela ziyethile sengathi ngumuntu Wand magic iminyaka kunabantu. Kodwa ukhilimu for isikhumba esomile emva 30 Kusafanele aqukethe iqoqo izithako neyaziwayo kahle futhi ewusizo. Ukwakheka izimonyo enjalo ngokuvamile baye allantoin. Usenza sizole ukucasulwa ubala futhi moisturizes isikhumba. Ukuba khona bisabolol inikeza umphumela anti-inflammatory futhi opholile. Acidosis acid kanye panthenol - kuyinto moisturizers yemvelo ukuthi isinyathelo isikhumba esomile njengoba imvula ezuzisayo. Futhi ayinto mithandazo futhi uyaxebuka regenerates futhi ivikela epidermis emisebeni yelanga.
Bioflavonoids - kukhona Antioxidants ukuthi ukulwa radicals khulula. Ungagxambukeli ukhilimu, salicylic acid unclogs ikhule ezimbotsheni, namavithamini. Uma une isikhumba esomile kakhulu, udinga ukhilimu ne asidi i-hyaluronic. Le ngxenye akuyona uyasondla kuphela, kodwa futhi ukugcina umswakama ezingqimbeni engenhla epidermis. Ungakhohlwa mayelana izithako esakhelwe ukuletha ephulukisa izinto esikhunjeni. Lokhu sorbitol, nezinye amafutha abalulekile. Ngemva kweminyaka emine, kuyafaneleka ukunaka enjalo izinto ngempumelelo, ezifana retinol futhi azelaic acid. Uma ufuna ukhilimu ubuso isikhumba esomile, ukuncoma ngempela ukuba banamathele isigaba yazo.
Usezingeni we moisturizers engcono
Uma une isikhumba esomile ukuze kuholela dermatitis, udinga ukwelashwa sina. Ezimweni ezinjalo, ukusiza ukuba amalungiselelo hormone, amaphilisi antihistamine kanye nokunye okufana nalokho. Kodwa uma inkinga uyaxebuka, ububomvu kanye ukulunywa okukhanya, wena uyobasindisa ukhilimu ezinhle nezisebenzayo isikhumba esomile. Isilinganiselwa iqala incazelo Mizon Hyaluronic Ultra Suboon umkhiqizo. Ngegama kuyacaca ukuthi ukhilimu South Korean iqukethe asidi i-hyaluronic. Le into is hhayi amuncwa umzimba, kodwa izinhlobo esikhumbeni ultrathin ifilimu zokuzivikela okuyinto evimbela umswakama shabalala.
Ukungaguquguquki kulo mkhiqizo isilinganiso yezimonyo - phakathi ukhilimu ukukhanya-semi liquid jelly. Umbala - omhlophe, kancane esobala. Iphunga neze wazizwa. On the isikhumba, lo ukhilimu is kweso amuncwa umzimba, kunalokho, uqala ukwenza ukwakha ifilimu elincanyana. Kule ubuso ubukeka bushelelezi futhi Velvety. Cream ngokuphelele futhi unomphela moisturizes isikhumba. Ngentengo ruble amane namashumi ayisikhombisa tube ngayinye iyithuluzi - nje godsend.
XeraCalm AD lipid-libuyisele Cream ngu Avene
Ubuso Cream "KseraKalm AD" yasungulwa yinkampani French "Avenue" ngokuqondile ukubuyisela ibhalansi Hydro-lipid of isikhumba esomile. Yamadivayisi Pharmacy njengoba awukudla izimpawu of atopic dermatitis. Ukhilimu has a obukhulu ukungaguquguquki wamafutha. Lapho isetshenziswa esikhumbeni, it yakha lipid umngcele ovikela kusukela ukucasulwa ubala futhi omiswe. Leli thuluzi regenerates, silondoloza kusuka ukulunywa, aqede ukuvuvukala, uyaxebuka awukudla.
Njengazo zonke ukunakekela imikhiqizo Avene inkampani, ubuso cream "KseraKalm AD" luqukethe amanzi ezishisayo emthonjeni ukuphulukiswa Aveni. Izibuyekezo uqaphele omunye umkhiqizo akhiwa brand French kubantu abane atopic dermatitis (isikhumba ngokungavamile ezomile). Lokhu "Sikalfat yokulungisa Cream." It lenziwe Ukuvikelwa kanye nokwelashwa ukulimala kanye epidermis mncane kakhulu. Izibuyekezo bathi umsebenzi wabo kusho ubhekana kahle. Okuwukuphela negative - intengo. Ezimakethe Russian esebenzisa "Avenue" akuzona esingaphansi ayizinkulungwane ruble.
"Cuenca Hydra" kusukela Clarins (ubuso ukhilimu)
Vele omunye isicelo ekuseni ukuze isikhumba bahlanzwa futhi umuzwa yobunzima zinyamalale ngokuphelele. Ubuso sengathi amehlo abasebasha. Isikhumba fresh, shiny, abushelelezi, soft futhi uzilungise. Lokhu ukhilimu ubuye efanelekayo kulabo inhlanganisela isikhumba, ikakhulukazi ebusika. Ngo sikhula kahle ezindaweni ezibandayo efana izindlela kudala ifilimu zokuzivikela evimbela izici eziyingozi kwemvelo abakucasulayo le epidermis. Futhi labo isikhumba esomile kakhulu, singakwazi ukuncoma "Cuenca Hydra Rich" by Clarins. Cream yalesi brand ngaphezulu ukuthungwa obukhulu, futhi silisebenzise kufanele kube ebusuku. It hhayi kuphela moisturizes kodwa uyasondla isikhumba esomile. . Kusho ke kunomphumela isikhathi eside. It hhayi kuphela unakekela, kodwa empeleni kususa isikhumba esomile. Bheka usuku kusho ukwakheka? Khetha "Clarins HC Plus HP" nge isikhumba elangeni 40.
Cream "Isazi Hydration" kusukela "L'Oreal Paris"
I eqinile French L'Oreal Paris oluqalisa production akubizi isigaba mass-emakethe. Ukuze isikhumba esomile, udinga ukukhetha ukhilimu komugqa "Hydration Expert". kakade Sithe intengo akusho kusho ngempumelelo, kanye nokusungulwa. Cream "Hydration Isazi" iqukethe izithako ezisebenzayo ukuthi ngokoqobo bazogcwalisa zonke cell dermis.
amafutha Precious ebalulekile black currant kanye rose ukusiza ejenti sokwelapha ukuze uthole ngaphakathi kwesikhumba. Zidla kubo futhi kuvimbele umswakama ukulahleka. Ngokusebenzisa ubuso ukhilimu iba bushelelezi, imisebe, abasha. Abantu ne isikhumba esomile is umuzwa yobunzima ukungakhululeki eyaziwa emva kokukhipha izimonyo. Ukhilimu-ijeli "ngesisa ngokuphelele" ka-L'ORÉAL Paris ungakwazi balahle lezi zinkinga. Lokhu kusho ngokucophelela kususa izimonyo, kususa kusukela ngaleso sikhathi ubuthi.
"La Roche-Hlwanyelani Ninombono Hydra Rich"
Uma ufuna ukhilimu ukuqeda ukoma kwesikhumba, khona-ke kusho ukuthi ncamashi kufanelekile. Ukuze ejenti ekwelapheni lwangena shí epidermis, umenzi usanda kwethula lento emanzini selenium-ahlanganiswe emthonjeni ezishisayo Hlwanyela-La Roche. Lokhu ukhilimu has a ukuthungwa obukhulu. Kufanele zisetshenziswe ekuseni ngaphambi sokulala. Kusho, njengoba kushiwo ngumkhiqizi futhi baqinisekisa ngezibuyekezo, hhayi kuphela uyasondla isikhumba umswakama anikeza ukuphila, kodwa futhi uyasondla ngayo izinto eziwusizo kanye amavithamini. Ukhilimu kuhlanganisa gidrolipidy, okuyinto abe ukufana esimangalisayo emangqamuzaneni epidermis. Ngenxa yalesi thuluzi is kweso kokukufunda nokukugcina umswakama ngaphakathi kwesikhumba. Uma usebenzisa imoto isikhathi eside ke, izimpendulo njengoba siqinisekiswa zinyamalale ukucasulwa ubala futhi flaking.
Cream "Hydra 24" kusukela "Payot Paris"
brand French Payot Paris kuhambisana kahle nokwenza amathuluzi zonke izinhlobo isikhumba. Ukuze dermis overdried asondele umkhiqizo ofana "Hydra 24". Umenzi uthi lokhu ukhilimu akuyona ngokuphelele kuphela moisturize isikhumba esomile, kodwa futhi qinisa nentaba ebusweni. Izibuyekezo uqaphele ukuthungwa ukukhanya, iphunga avulekile futhi emnandi, ukumuncwa ngokushesha.
Cream moisturizes ngempela ngisho ebusika nesithwathwa kususa uyaxebuka. Kulokhu, awusebenzi ushiye okunamafutha noshukela kancane mattes. Okuwukuphela negative - inani elikhulu ezimbili kanye ruble isigamu ngenguqulo ibhodlela namamililitha amahlanu. Kodwa lokhu ukhilimu is yokuqothulwa kancane. Phela, imini nobusuku asenze nkambu eyodwa kancane.
Kusho for ukunakekelwa ezizungeze amehlo
Zamehlo ezomile, ngisho nabantu isikhumba oily. Yini esingayisho ngesimo abantu atopy? Indawo eseduze naleli amehlo - kuba sibuthaka kakhulu. Isikali ku Isivalo engenhla ungayeki imbangela umbala izimonyo. Skin ibukeka wacasuka ububomvu. Yini ukuzikhethela endaweni iso? Abasebenzisi ukuncoma 15-ngemililitha tube "Tsikaplast Baume B5" kusukela sekushiwo inkampani French "La Roche-Hlwanyelani Ninombono." Lokhu ukhilimu ubuso ngoba izimpendulo isikhumba esomile kubizwa ngosindiso leminyaka. Futhi amanzi ezishisayo esebenza umphumela okulalisayo, futhi panthenol izindlela yakhiwa iqoqo ejenti ekhethekile ekwelapheni. I ewumngcingo itjhubhu tube ivumela ichashaza ukubeka ukhilimu ku Isivalo. Uyaxebuka isicelo yilezi, ububomvu ukuxegiselwa. Inani izindlela - ruble ezingamakhulu amathathu tube ngayinye.
Iziqhumane isikhumba esomile
BB (Blemish Amafutha) - lokhu ukugqiba namafutha zokwelapha, ukhilimu kokuba ithoni umbala. Thina ayisungula eJalimane sokulungiswa kabusha isiguli futhi kungenziwa ukuboniswa abantu yadlula ngokushesha ngemva peelings ezijulile noma ukuhlinzwa isikhumba. ngokushesha kakhulu BB izimali ziye zasetshenziswa njengoba izimonyo zokuhlobisa - efana okhilimu. Futhi ngubani ayithandi abantu isikhumba esomile ukwazi ukuthi kungakanani owenza lubonakale flaking powder ezihlangene!
Phakathi tonalnikov kahle BB Cream "Garnier". Ukuze isikhumba esomile iyithuluzi - insindiso yangempela! Ukhilimu hhayi kuphela buso uyaxebuka, futhi enakekela dermis, okunomsoco ngayo umswakama. Ukwaluka lokhu izimali ketshezi, njengoba oketshezini. Ngakho-ke, it is kahle basakaza futhi ukubopha esikhumbeni, ngaphandle kokudala umphumela buso. Cream thembeke uyazifihla ububomvu, kusihlwa isikhumba tone.
"Baby Ubisi" kusukela "Baby Line" (Germany)
Izingane ukunakekela izimonyo, ngokungafani omdala sihamba ukulawula ezengeziwe izinga. Ngakho-ke, singaqiniseka ka: insipho, imithi yokugeza izinwele, okhilimu, nama-ngisho powder ukugeza eyenzelwe izinsana, ngeke abangele ukusabela nomzimba. Baby ubisi kusukela inkampani German "Baby Line" moisturizes kahle njengoba mncane njengoba izicubu paper, isikhumba kwezinsana. It umboza like ifu obucayi ukunakekelwa, futhi lo mphumela ihlala isikhathi eside. Ubisi akusho Roll, akusho ibala izingubo, ugxile ngokushesha futhi akwakhi umuzwa ifilimu okunamafutha. It has a nephunga okumnandi ingane powder. Uma ufuna izindlela zokunakekela umzimba, ubisi kusukela "Baby Line" uzokusiza. It ngokuphelele moisturizes isikhumba esomile kanye nokuzikhulula ekucindezelweni ukulunywa.
izimonyo abakhathalelayo Russian
Esikhathini ephansi intengo ingxenye ukusebenza umholi "Natura Siberika". ukhilimu ebusweni isikhumba esomile iqukethe eziyinkimbinkimbi imithi herbal futhi, okubaluleke kakhulu, asidi i-hyaluronic. Le into yokugcina phezu dermis lidale ifilimu ongabonakali evimbela umswakama shabalala. Ukhilimu ngcono isikhumba tone. Ithuluzi kusiza ukumelana imvelo ezonakalisayo. Isikhumba neliberegiswako iba zazivuma futhi ezithambile.
Izimonyo "Meri Khiye" - esibonga abasebenzisi Izibuyekezo
Indlela ukukhetha concealer futhi ugweme amaphutha?
Kanjani ukusebenzisa iso shadow
"Meybelin" Mascara "Push-Up Drama» (Maybelline Push-Up UMDLALO): incazelo, amanani, ukubuyekezwa
"Maye kusukela Wit", ubani owayiloba? NJENGOBA Creation Griboyedov
Oak (umuthi): incazelo. Yeka ukuthi kuyinto kwesihlahla se-okhi
Bhisikidi, okuyinto njalo kuvela: iresiphi ngesithombe
Kungani dream of a idemoni? Dream ncwadi izokusiza ukuba uthole impendulo
Isitha esiyinhloko se-Spider-Man. Ubani i-Vulture (Marvel)?
Indlela yokwenza ukubhoboza ku ekhaleni
Uyoba yini umsebenzi isicelo selivu ngaphandle kwenkokhelo
Indlela ukushintsha Ikhasi lasekhaya esipheqululini eziningana ezithandwayo?